Nhau - Ichokwadi nezve Makofi Tafura uye Nei Uchifanira Imwe
Isu tinogara tichiwana mibvunzo, uye chimwe chedu chakajairika ndechekuti iwe unoda tafura yekofi. Kumbira chero mugadziri wemukati uye ivo vachakuudza, shanda fomu rehwamanda mune zvese zviitiko. Nei uchigadzira kamuri yakanaka kana iwe usingazomboishandisa? Ndicho chikonzero nei zvichikosha kuti uone mashandisiro aungaita nzvimbo usati watanga kutenga. Kune yako imba yekutandarira, iwe ungangove uri kutarisa terevhizheni, kugamuchira shamwari, uye kuzorora nemhuri. Imba inofanirwa kuve yakasununguka.
Pinda tafura yekofi. Mushure mekugara kwako, ndicho chidimbu chakakosha mukamuri rako rekutandarira nekuti chine zvinwiwa, kure kwako, zvekuverenga, uye inzvimbo yekumisikidza tsoka dzako. Imba yega yega yekutandarira inoda imwe, uye isu tiri pano kuti tikufambise pane zvaunofanira kufunga usati wasarudza imwe.
1. Kofi Tafura Saizi
Tafura yako yekofi inofanira kunge iri pakati pegumi nemasere kusvika gumi nemasere kubva chero zvigaro zvakakomberedzwa pairi, uye zvechokwadi hapana anopfuura masendimita makumi maviri nemana. Saka kana iwe waradzika pasi yako, iwe unofanirwa kuona kuti yakakura sei tafura yekofi iwe yauchazoda.
Kumakamuri makuru kwazvo ehupenyu, funga kushandisa matafura maviri ekofi padhuze nepadhuze. Kana kana imba yako yekutandarira isiri yekupfuura, unogona kuenda yakatokura.
2. Funga nezveChimiro
Nzvimbo dzakasiyana uye marongero anodaidzira akasiyana maumbirwo, asi hechino chinhu chekufunga nezvacho. Kune iyo dhizaini yakavharwa zvakanyanya, square kana rectangular inoshanda zvakakwana.
Kana imba yako yekutandarira ichipfuura, uye iwe unowanzo kunge uchifamba uchitenderedza tafura yekofi, kutenderera kunoshanda nemazvo.
Aesthetically, isu tinoda kuenzanisa kutenderera uye maumbirwo akaenzana munzvimbo, saka kana mazhinji emidziyo yako yemidziyo akaenzana (funga pasofa ine tuxedo maoko, mativi emoto, uye mativi ematafura mativi), tafura yekofi yakatenderera inowedzera chiyero. Neimwe nzira, kana iwe uine maoko akakombama pane yako fenicha, girazi rakakomberedza rakatenderera, uye akakomberedza tafura yemativi, sikweya kana rectangular yematafura tafura inoshanda zvakanaka. Izvo zvese nezveyero.
3. Pedzisa Kamuri
Hapana nzvimbo inofanirwa kushandisa kupedzisa kumwechete pane yega yega nzvimbo, saka sekufanana nechimiro, tafura yekofi inogona kuva nzira yekuunza chimwe chinhu chitsva munzvimbo yako. Kana iwe uine jira remubhedha pamubhedha wako kana zvimwe zvinhu zvechivanhu, tafura yakajeka kana inopenya yekofi inoenzanisira iko kusanzwisisika. Kana kana iwe uchizenge uri kushandisa yako yekutandarira yekutarisa terevhizheni, sarudza yekupedzisira iyo iwe yausingafunge kuisa tsoka dzako pamusoro, kunge hushoma hushoma huni kana yakasimudzwa ottoman.
4. Kugadzira Tafura Yako yeKofi
Paunenge uchinge watora tafura yako yekofi, funga zvishongedzo. Kune imba yemhuri mauri kuona TV, iwe ungangoda kusiya yakawanda nzvimbo yekutsigira tsoka uye nekumwa zvinwiwa. Tafura yekofi ine shefu yepasi inoshanda zvakanyanya munzvimbo idzi nekuti unogona kuisa mabhuku nematayi pasi, uchisiya nzvimbo yakawanda pamusoro.
Chengeta zvese zvishongedzo zvakaderera, sezvo iwe uchida kugona kuona pamusoro pazvo. Chero chipi zvacho chakareba chingavharira mutsara wako wekuona.
Wedzera zvakakosha: kuverenga zvinhu, bhokisi rechitunha, coasters, bhokisi remota, kenduru, mabhuku emitambo, kana chero chinhu chipi zvacho chaunoshandisa kazhinji chinogona kuratidzwa.
5. Ottomans uye Masumbu
Zvino, haisi imba yekutandarira yega yega inofanirwa kuve ne "tafura yekofi" - mune mamwe mazwi, unogona kushandisa ottoman, pouf, kana sumbu rematafura madiki emativi mune zvimwe zviitiko. Chinhu chakakosha ndechekuti iwe une chimwe chinhu munzvimbo ino yekuita basa - ottoman, maviri kana matatu ematafura emativi akabatanidzwa pamwechete, kana kureba tafura yekukwirisa tafura inogona kushanda zvese zvichienderana nekuti unoshandisa sei nzvimbo yako yekugara.
6. Matafura eKofi uye zvikamu
Kana iwe uine chikamu, unogona kuswedera patafura yako yekofi zvakati siyanei. Zvikamu zvakawanda zvine chaise pane imwe kana maviri magumo, saka pamwe haungave kuisa tsoka dzako patafura yekofi. Izvi zvinokupa iwe yakawanda mukana wekushandisa girazi kana simbi matafura. Iwe unogona zvakare kuenda zvishoma zvidiki apa nekuti ivo vanenge vari vashoma tsoka traffic uye vashoma kufadza.